Top 10 Tips Easy Kuba Train Riding Smart Kuyo Yonke Indawo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Top 10 Tips Easy Kuba Train Riding Smart Kuyo Yonke Indawo
Ukuhamba ngololiwe ingaba yenye yeendlela ezininzi lokuphumla mnandi ukuba ukuhambahamba. Kufuneka wazi ukuba ukwenza njani okungcono ngaphandle kwe uhambo lwakho ube smart. Eziququzelelweyo kakuhle yaye ukwazi oko nto uhamba umgama omde ekwenzeni uloliwe wakho uhambo a ukuqaqambisa of iholide yakho okanye adventure. Thatha ujongo kwi kula Top 10 Tips lula Train Riding Smart. Zilungiselele ukuba uhambo lwakho olulandelayo.
Top 10 Tips lula Train Riding Smart – ICEBISO ONE: Thenga itikiti lakho In Advance
Top 1 we Top 10 Tips lula Train Riding Smart, Qinisekisa ukuba ukucwangcisa uhambo lwakho bathenge amatikiti etreyini wakho kwangethuba ukuze uqinisekise ukuba ufumana kwi oololiwe ofuna. Qiniseka ukuba ukubuza malunga naziphi specials okanye izaphulelo leyo esenokuba iyafumaneka kuwe. Ngubani na uthando kulondolozwa enye imali! Uya kukwazi Ukugcina imadlana ukuba inkcitho kwezinye iindawo uhambo lwakho.
A nebhinqa Station Train
ICEBISO EZIMBINI: Stow Impahla yakho
Okungcono Easy Tips for Train kukuba abasoloko Kufuneka ukuba uhlole iingxowa kwaye ukuba kukho sobungakanani obububo unako kwakhona ukukhetha ukugcina nabo nesakhelo ngentla kwesihlalo okanye esime kuwo isithuba elingunxantathu phakathi izihlalo-to-back. Le ndlela une ezingxoweni zenu kufutshane kuwe maxa onke amaxesha.
ICEBISO EZINTATHU: Yiba Smart ngeebhegi zakho
Thina wayengathi yonke uloliwe sele ukulungele ukuba uziphose kwi ithuba lokuqala bafumane isela, kodwa kunokuba ube phezu aphephe. Iliso xa kuziwa ezingxoweni zenu. Ukugcina kwabo ukuqonda kunokuba ekupheleni imoto kaloliwe. Ukuba unayo ubhaka unako kwakhona clip neziziba yakho yokubeka imithwalo ukuze sikhuseleke extra.
ICEBISO EZINE: Fumana Seat wakho
Ukuba wasebenzisa Tips zethu zangaphambili Easy lokuhamba Train yaye wayembekele isihlalo konke ihlelwa. Ungaya ngqo endaweni yakho. Ukuba akukho njalo, wamkelekile ukuba ibango nayiphi isihlalo Siyazidla. Ukuba akukho ezininzi afumaneke, khangela tags kwamathandabuzo iposelwe ngaphezu kweetrone okanye iingcango gumbi. Tags zibonisa omde ngohambo isihlalo ntsho. Ezi ziphumo zibonisa ukuba ufumana phambi kokuba umnini nokuba ukhwela ukhululekile ukuba athathe isihlalo.
ICEBISO SESIHLANU: Sebenzisa Train Time Ngobulumko
Thatha ithuba lokusebenzisa ixesha elichithwa kwi uhambo ngololiwe ukuze ngokwakho umbutho. Ungenza izicwangciso oya kuyo elandelayo. Sebenzisa eli xesha ukufunda incwadi yakho, hlola ndlela oya kuyo elandelayo. Yiya izithombe zakho, hlela ubhaka, kabini-ujonge uqhagamshelwano lwakho okanye ugqibezele nayiphi na eminye imisebenzi ekufuneka ngelixa unalo ixesha. Ukuba uhambo lwakho ixesha elide oku kwakhona ithuba emnandi ukuba ezinye zezinto ozibonayo.
Isikhululo senqwelomoya saseLyon ukuya eNice ngololiwe
ICEBISO zintandathu: Sebenzisa zangasese On The Train
Ukugcina zombini ixesha nemali zama ukusebenzisa le Easy Tips for Train kwaye usebenzise zangasese kuloliwe ngokuchasene ekusebenziseni kwabo kwisikhululo. Zangasese Uloliwe ngokuqhelekileyo zibekwe ekupheleni ezimotweni yaye bacocekile kakhulu kunabanye zangasese kwizikhululo, kwakunye nokuba free.
ICEBISO ASIXHENXE: Talk to Locals and Other Travelers
Icebiso 7 aphume Top yethu 10 Tips lula Train Riding Smart, Yintoni indlela engcono ukufunda malunga isixeko okanye ilizwe kunokuba ngokuthetha kwayo bakule, okanye ezinye abahambi ekusenokwenzeka ukuba baye kuloo ndawo uya? Baya kukwazi ndinichazele ins kunye outs yakho indawo ekuyiwa kuyo nokucebisa ukuba ngoko ukukwenza noko ukwenza. Zama laphula umkhenkce ngokubuza umbuzo, kokunikela konamandla okanye ukubonisa ukusuka kwidolophu yakho.
ICEBISO SESIBHOZO: Zokupakisha Yidla
Ukuhamba umsebenzi ulambile kwaye ungafuna apakishe into izimuncumuncu xa wena kuloliwe. Uyakwazi Stock ukuya kwi ukudla kwakho osithandayo evenkileni okanye deli okanye ukutyelela iwayini phambi kokuba itshakace ngayo uloliwe; kakhulu kwizikhululo zikaloliwe kufuneka ubuncinane enye yezi. the ukutya okunikelwe koololiwe Kudla eliqhelekileyo ezibizayo ngaphandle kokuba uhlawula isihlalo lokuqala-class.
ICEBISO ELITHOBA: Yazi Ukuze Fumana phi Off
Yazi isikhululo yenye Tips kubalulekile Easy ukuhamba Qeqesha. Xa ufika kwisixeko ukuze uyeke kwizikhululo eziliqela ipoma ngemiqondiso ebonisa igama oya lakho kunye negama ebumelwaneni, kodwa musa xhumela off ude ube ufikelela isikhululo central. Unakho ukucela amanye abakhweli okanye ujonge incwadi yakho uncedo olungakumbi.
ICEBISO TEN: Soloko Khumbula Local Train yokuziphatha
Phawula indlela abanye abakhweli emotweni yakho uloliwe baziphethe. Ukuba edambile, qiniseka ukulandela ekhondweni. Qaphela iimpawu asenokubonisa ukuba bahleli imoto echongiweyo cwaka apho abantu beza kulala okanye umsebenzi. Enoba uphi wena uhleli, ukuba ningazami ukuba umntu zingxola endhawini. Yiba Qiniseka ukuba singaphumli iinyawo zenu phezu kwesihlalo malunga nawe, Ngaphandle kokuba unawo izihlangu zakho off.
Ukuba ukhumbula ezi Top 10 Tips lula Train Riding Smart osisiqinisekiso na uhambo super kunye nolwazi jikelele. Kusenokwenzeka nabanye balapha ezintsha nokwenza abanye abahlobo! Nantoni na ingenzeka xa kuziwa yokuhamba yoqeqesho. Wakuba Iyakwazi le, ke cinga Bernina Express kunye nokuninzi!
– Ukuba uthandile post yethu Top 10 Tips lula Train Riding Smart, uzive ukhululekile ukwabelana ngayo, amaqhosha sifika lokwabelana ngezantsi nje le post blog.
Ukulungele ukuba ukukhwela uloliwe? Incwadi isihlalo sakho uze uhlawule naziphi na iifizi lebhola kwi – www.saveatrain.com
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-10-easy-tips-for-train-riding-smart/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
amacebiso traintip train Travel